पुरुषहरुमा Hipster केशविन्यास | स्टाइलिश पुरुषहरू
हिपस्टर हेयरस्टाइल फेसनमा छ र हरेक वर्ष यो एक विशेष र चापलुसी स्पर्शको साथ पुन: स्थापित हुन्छ। अन्डरकट शैली धेरै बर्ष पहिलेको कटौतीको बीचमा अवस्थित छ, तर hipster शैली हाम्रो बीचमा धेरै उपस्थित छ धेरै समय पहिले देखि, यो यो जस्तो लाग्न सक्छ।
उसको उपस्थितिलाई त्यो आकस्मिक र बोहेमियन शैली चाहिन्छ, किनभने उसको कपाल, दुबै छोटो र लामो फेला परेको छ झाडी दाढीको साथ ट्यूनमा। यसको काट पुरुषहरुका लागि बनाईएको छ जसले फेशन र धेरै व्यक्तिगत जीवनशैली चिह्नित गर्न सक्दछ, किनकि यसको आकार अन्य कपालबाट फरक छ।
1 Hipster केश शैली को प्रकारहरु
1.1 छोटो कपालको लागि हिपस्टर कपाल
1.2 लामो कपाल को लागी Hipster केश
1.3 आधा मानेको साथ हिपस्टर कपाल
2 कसरी एक hipster केश प्राप्त गर्न?
Hipster केश शैली को प्रकारहरु
यो केश शैली पहिले नै एक प्रवृत्ति सेट गरिरहेको छ personality वा years बर्षको व्यक्तित्वको साथ। हिपस्टर शैली भविष्यमा शर्तमा जारी राख्नेछ, किनकि आउने बर्षहरूमा यसले पुरुषहरूमा आधुनिकतालाई चिन्ह लगाउने छ। तिनीहरूको प्रकारका हेयरस्टाइलहरू तल फेला पार्न सकिन्छ।
छोटो कपालको लागि हिपस्टर कपाल
हामी छोटो कपाल संग यो शैली प्रेम, एक अधिक सुरुचिपूर्ण र तैयार मान्छे को त्यो उपस्थिति दिन्छ। शहरी जनजातिको ताजगी र स्वर दिन यसको पक्षहरू पूर्णतया कपाल गरिएको छ, र माथिल्लो भाग अझ बढी जनसंख्या भएको छ। यस अवस्थामा, केन्द्रीय कपाल केहि लामो हुनेछ ताकि यो केवल तलतिर वा पछाडि झर्छ। दुबै केसमा, कपालमा भोल्युम सँधै बाहिर आउँदछ, यो hipster केशको केही खास विशेषता।
ट्पीइ व्यवस्थित गरीएको र अतिरंजित तरिकाले यो आफ्नो रूप मा बाहिर खडा र अधिक सान्दर्भिक बन्न भयो आज पहिले अस्वीकार बिना। परिमाणको धेरै मात्राको साथ ग्रुमिड र स्लिस्ड-ब्याक ट्पीपी धेरै जंगली र साहसी छ, व्यक्तित्वका लागि चिनो लगाउन चाहने पुरुषहरूको लागि प्रामाणिक।
लामो कपाल को लागी Hipster केश
यो उहाँको उत्कृष्ट छवि हो, दाह्रीको साथ उसको लामो कपालको लुक। यो यसको शैलीको लागि मुख्य आईकन हो। यदि तपाइँ लामो कपाल लगाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि यो जुन यो गर्मिमा प्रवृत्ति सेट हुन गइरहेको छ र हामी यहाँ यसलाई लगाउने विभिन्न तरिकाहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
बोक्न सकिन्छ बीचमा विभाजित ढीला कपाल र त्यो अनुहारको दुबै पक्षहरूमा स्वाभाविक रूपमा खस्छ। यदि तपाईंसँग लहरदार कपाल छ भने तपाईंसँग यो प्रदर्शन गर्ने र यसलाई एक सानो जंगली स्पर्श दिने अवसर हुनेछ, हो, दाह्रीको अभाव छैन र एकदम भरिएको छ। अर्को विकल्प बोक्नु हो कपाल फिर्ता काटियो ताकि यो तपाइँको अनुहारमा अड्किएर लगाउन परेशान गर्दैन। एक महान फिक्सेशन प्राप्त गर्न तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ एक सानो फिक्सिंग क्रीम वा जेल र केही भोल्युम छोड्नुहोस्।
यदि तपाइँ यसलाई लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई पोनीटेलसँग टाँस्न सक्नुहुन्छ। उहाँको छवि ती द्वारा हावी छ धेरै उच्च pigtails, ती मध्ये केही एक धनु संग संकलित। कि हिपस्टर टच दिनको लागि, तपाईं टाउकोको छेउहरू हजाम बनाउन सक्नुहुन्छ र अधिक शहरी शैली लगाउन सक्नुहुन्छ। पोनीटेलमा आफ्नो कपाल लगाउनुहोस् तर कपाल तलको साथ अर्को तरिका हो। फेरि यो जंगली लुक दिन, तपाईं आफ्नो कपाल tousled छोड्न सक्नुहुन्छ, यो एक पागल र ईम्प्रूवाइज्ड तरिका हो जुन तपाईंलाई धेरै मनपर्दछ।
आधा मानेको साथ हिपस्टर कपाल
Hipster कपाल को लागी आधा कपाल यो साहसी र परिष्कृत छ। सबै पुरुषहरू राम्रो देखिन सक्दैनन् र यस हेयरस्टाइललाई सँधै समेट्ने प्रयास गर्नु आवश्यक पर्दछ, यसैले, यो पुरुषहरूका लागि हो जुन उनीहरूको केशको बारेमा भावुक छन्, उद्यमशील र दृढ दृष्टिकोणको साथ।
कपाल तपाईंले यसलाई मध्यम उचाइमा बढ्न दिनुपर्दछ र विचार भनेको भोल्युमको प्रभाव सिर्जना गरेर फिर्ता लिने प्रयास गर्नु हो। सिर्जना गर्न सकिन्छ एक हिपस्टर कपाल एक भत्काइएको आधा लम्बाइ कपालको साथ, छेउमा कंघी रहेको कपालको साथ वा पछाडि कपालले कपालसहित। यदि तपाइँको निर्णय अनिर्णययुक्त छ भने तपाइँ दुबै अवधारणाहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ, सम्भवत सबै भन्दा राम्रो संयोजन भनेको पछाडि कंघी गर्नु हो र त्यसपछि यसलाई छेउमा अलिक मोड़ दिनुहोस्।
कसरी एक hipster केश प्राप्त गर्न?
यो केश प्राप्त गर्न गाह्रो छैन, तर यसलाई तपाइँको दैनिक टच-अपहरू आवश्यक पर्दछ कपाल फिक्सि products उत्पादनहरूको मद्दत। अभ्यासको कुरा तपाईले प्राप्त गर्न चाहानु भएको केश मूल्या assess्कन गर्न र केहि सरल चरणहरूको साथ तपाईं यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो सल्लाह हो उत्तम फिक्सिंग उत्पादनहरू पाउनुहोस्, जहाँ उनीहरूले प्रयोगको भोलिपल्ट कपालमा छोड्दैनन्। तपाईको केशलाई अभ्यासमा राख्नु अघि सफा कपाल राख्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा कम्पोनेन्टहरूको समान प्रभावकारिता हुँदैन।
तर यो पनि सिफारिस गरिएको छैन धेरै पटक तपाईको कपाल धुनुहोस्, किनकि स्क्याल्पमा जलन हुन सक्छ र कपालले यसको प्राकृतिकता र चमक गुमाउन सक्छ। हेयरस्टाइल गर्नको लागि तपाईसँग हुनु पर्छ थोरै फिक्सिंग उत्पाद थप्नुहोस् (जेल, जेल, मोम, मोडेलि paste पेस्ट वा लाह) र ईम्प्रोभाइज गर्नुहोस्, किनकि यसले यसको आकार लिन्छ तपाईं केही थप थप्न सक्नुहुनेछ ताकि यो पूर्ण रूपमा फिक्स भयो।
यदि तपाईंलाई आधुनिक केश शैलीहरू मनपर्दछ र के यो मौसममा सब भन्दा लोकप्रिय छ भने, तपाईं हाम्रो सेक्सन मा पढ्न सक्नुहुन्छ हेयरस्टाईल पछाडि, क्लासिक कटौती, कसरी perms वा राम्रो गर्न को लागी पनि टाउकोमा कपाल
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुषहरूको लागि Hipster कपाल